Muxuu Raphael Varane Ku Soo Kordhin Doonaa Premier League? Fashil Mise Fariid? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMuxuu Raphael Varane Ku Soo Kordhin Doonaa Premier League? Fashil Mise Fariid?
Muxuu Raphael Varane Ku Soo Kordhin Doonaa Premier League? Fashil Mise Fariid?
July 28, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 11
Raphael Varane ayaa u wareegay Manchester United isagoo ka soo tagay Real Madrid ka dib koobab badan uu ku qaaday Santiago Bernabeu, iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu u muuqdo mid adkeeyay kooxdiisa ka hor xilli ciyaareedka cusub.
Xiddiga Faransiiska ayaa ku soo guuleystay koobab tiro badan intii uu joogay caasimada Spain, wuxuu soo qaaday afar koob oo Champions League ah, afar Club World Cup, seddex UEFA Super Cups, seddex La Liga, seddex Supercopa de Espana iyo hal Copa del Rey isagoo 300 kulan ka badan u saftay Los Blancos, waxa uu xitaa Koobka Adduunka la qaatay France sannadkii 2018.
Waxaa si cadaalad ah loo oran karaa in 28 jirkaan uu ku soo guuleystay wax walba ilaa iyo haatan, sidaasi darteed tayo aad u weyn ayuu ku soo kordhin doonaa Manchester United. Waa meel ay Manchester United ka liidatay tan iyo markii ay ka tageen daafacyada Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic.
Varane waa daafac dhameystiran kaasoo si weyn ugu haboon kubada casriga ah. Madaalenimadiisa iyo sida uu ciyaarta u akhriyo ayaa siineysa asxaabtiisa inay weerar joogta ah qaadaan iyagoo aan ka walwaleynin in kubado rogaalcelis ah looga faa’ideysto. Wuxuu xitaa awoodaa inuu bilow u noqdo kubadaha rogaalceliska ah isagoo kubada gadaal ka soo dhisaya.
Dadka qaar ayaa sheegaya in Varane uu ku dhibtoon doono inuu la qabso kubada orodka iyo xooga ah ee Premier League, laakiin daafac leh awoodiisa iyo maqaamkiisa wax dhibaato ah kuma ahan inuu la qabsado kubada Premier League, mana wajihi doono waqti adag uu kula qabsado ciyaarta Man United iyo tan horyaalka.
Waa xiddig si weyn loogu yaqaano inuu ilaashado booskiisa, wuxuuna ka fiirsadaa taakalada uu sameynayo marka uu kubada difaacanayo, isagoo sidoo kale khabiir ku ah jarida baasaska halista ah ee sababi kara gool.
Madaama uu yahay xiddig degan oo fudeyd badneyn, waxay si fiican isku fahmi doonaa Harry Maguire kaasoo ah cagsiga Varane islamarkaana ciyaara kubad xoog ku dhisan, waxayna la mid noqon doontaa iska garab ciyaaris la mid ah tii isaga iyo Sergio Ramos ee Los Blancos.
Dhererkiisa iyo xoogiisa ayaa sidoo kale la micno ah inuu ku xoogan yahay kubadaha madaxa ah taasoo United u noqon doonta faa’ido marka ay difaacanayaan koornooyinka, karoosyada iyo laadadka xorta ah, sidoo kalena wuxuu halis ku noqon doonaa xerada ganaaxa ee kooxda ka soo horjeeda.
Su’aal la’aan Varane wuxuu horumarin doonaa daafaca Manchester United isagoo ku soo kordhinaya khibrad iyo awoodiisa kubadeed. Ciyaaryahan maqaamkiisa oo kale leh wuxuu horumarin karaa koox walba oo ka dhisan dunida.
Akhriste maxay kula tahay adiga? Varane miyuu la qabsan doonaa Premier League iyo Manchester United?
Abdikafi Ahmad says:
Haa si wanagsan ula qabsan donaa waa dafac orod iyo awoood isku dharsaday waxuna ka mid yahay dafacyada casriga ah
Abdinoor slad says:
Si fuduuf ayu oola qabsan doona man u wax ku adkan doono majiran .. Qofka hadu qibraad leedahy mel walbo si fudud ayu ola qabsadaa
Xuseen c/laahi cali (aayatulaah) says:
Taasi waa su,aal furan lkin waxaan u maleeynayaa in uu la qabsan doono sababta oo ah qibradiisa marka laga yimaado waxaa saacidayo koobab badan oo uu finalkooda ciyaaray marka aad ciyaareyso ciyaar feynal ahna waxaa lagaa doonayaa taxadar badan maadaama uu koobab badan ku soo guuleeystayna taasi aayaan qabaa in wax walba aay ka saacidi doonaan mhd sanidiin
Aniga waxan ahay tageero united ah lkn fikir kiina wan kaso horjeda veran waxa u kuso guleystay koobab badan lkn marku nagu so biray waxan ogahay in u ku fashilmi doono malahan qibradi lagu ciyaari laha united iyo primer leagau waxan maskaxdeda ku jiro meqa goal ayu naga dhalin dona anaka badalkisa waxan ka doorbidi laha dermial turkey ah po juve u ciyaara
Bakar nuur says:
Wuu la qabsan doona walibo si fudut anigo ku hadlaya magaca man united
Anigu waxa agay tagere real varan wa lacib inbadan ban dawanayey hal mid bu ku xunyahay wa bila kalsoni wana fulay hadu ramos maqan yahay wu isku dhex yaca masuliyada xaga danbe ma qadi karo golashu iska dhaliya bal waxad ufirsata xiliyada magwire maqanyahay
Yaranka ina tifow says:
Ha wuu laqabsan doona wayo varen waa difac adag ubahnet man u in kasto marikii baloniga waji ka wiji lala imado gaool haya u naf ka radinayo
Haa si fudud
Sifudud ayuu ulaqabsanayaa kooxdana weey ubaahneed runtii
shaki la’aan man united waxay qaadi doontaa champion league sanadkaan lkn maya primary league man city ayaa kuceshan doonto halka man united 2aad gali doonto Chelsea sadaxaad liverpool si dirqi ayey 4aad kusoo fariisan doontaa varane hibadiisa waa xawaare feejignaan madaxeen iyo maquurin awood sare weerar yahanada oo la soomiyo
aad iyo aad runtii varane waa difaac adag khibradna leh marka la barbar dhigo difaacyada ay isku booska ka ciyaaraan
teeda kale mala qabsan doona mise wuu ku fashilmi doonaaa premier league oo ah horyaalka ugu adag wadamada yurub
kuna dhisan orod iyo xoog marka hore allaahu aclam
marka xigta waxay ku xirnaan doontaa raga ka garab ciyaaraya
hadii khaladaad ka iyo isku dhax yaaca garbihiisa ay bataan wuu ku fashilmayaa lkn hadii lala ciyaaro kalsooni iyo kubad dagan oo aan khal khal lahayn runtii runtii wuxuu noqon doonaa difaaca ugu adag wadanka ingiriiska sabab too ah maah mah ayaa tiraahda xiniinyo kuwa kugu jira ma ahan ee waa kuwa ku garabtaagan
marka ka ani ahaan waxan oranayaa wax walba waxay ku xirnaan doonaan team kiisa iyo tababaraha markaa laylinaya
lkn varane waa difaac dhameestiran khibrad iyo waayo aragnimo ku filan heesta oo aad u dagan man utd waxan aamin sanahay in uu wax badan ku soo kordhin karo waana booska ay aadka ugu baahnaayeen tababare O.G iyo team kiisa